Ogaden News Agency (ONA) – Madaxda Yurub oo Ka Shiraya Xaalada Murugsan ee Qaxootiga.
Madaxda Yurub oo Ka Shiraya Xaalada Murugsan ee Qaxootiga.
Madaxda dalalka badhtamaha Qaarada Yurub iyo Balkan-ka oo ku shiraya magaalo madaxda dalka Austria ee Vienna, ayaa isku dayay inay la yimaadaan qorshe mideysan, oo lagu xakamaynayo muhaajiriinta ku qulqulaya qaaradda Yurub.
Masuuliintan ayaa ku heshiiyay in Midowga Yurub looga baahan yahay in uu ilaaliyo xuduudihiisa dibadda. Hogaamiyaha Jarmalka, Angela Merkel, ayaa sheegtay in Midowga Yurub uu u baahanyahay wadashaqeynta dalalka Afrikaanka ah iyo sidoo kale Pakistan iyo Afghanistan, si ay u xaqiijiyaan in tahriibayaashu laqaabili waayo si wanaagsan dalalkooda loogu celiyo.
Ra’iisul wasaaraha dalka Hungry, Viktor Orban, ayaa ku celiyay baaqa ah in xarumo qaxooti laga sameeyo dibedda Yurub, sida Libya, halkaasi oo dadka magangaliya doonka ah codsiyaashooda loogu qabanayo.
Qaarada Yurub ayaa la ciir ciiraysa mawjad qaxooti ah oo kusoo fatahday tan iyo sanadkii 2015. Xaalada Qaxootiga soo gaadhay Qaarada Yurub ayaa aad looga dayrinayaa meelaha qaarkoodna dhibaatooyin kala duwan ay lasoo daristay qaxootiga.